Mgbe ị ga-aga Costa Rica | Njem akụkọ
Mgbe ị ga-aga Costa Rica
Mariela Carril | | Atụmatụ, Costa Rica
Central America abụrụla nnukwu njem nlegharị anya maka ndị niile na-achọ ịhụ ọdịdị okike, oke osimiri na osimiri kacha mma. Otu n'ime obodo kacha eme njem nlegharị anya bụ Costa Rica, Paradaịs okike nke meghere ọnụ ụzọ ya ma na-echere ọtụtụ ndị ọbịa mgbe afọ ndị a nke ọrịa gasịrị.
Ma ... Kedu mgbe ị ga-aga Costa Rica?
2 Kedu mgbe ị ga-aga Costa Rica?
Republic of Costa Rica bụ a obodo onye isi ala dị na Central America, mejupụtara ógbè asaa na ihe dị ka nde mmadụ ise bi na ya. Columbus rutere ebe a na Septemba 1502, n'oge njem nke anọ ya, na akụ na ụba ọla edo nke ndị bi na ya mere ka o kwenye na ala ahụ bụ kpọmkwem ... bara ọgaranya. Ọ bụ otu n'ime echiche nke aha ahụ.
N'oge colonial ọ bụ a ndabere nke Captaincy General nke Guatemala, akụkụ nke Viceroyalty nke New Spain, wee nọgide ruo mgbe nke ya nnwere onwe na Septemba 15, 1821. Nke bụ eziokwu bụ na akụkọ ihe mere eme nke obere mba Latin America yiri nke ndị agbata obi ya ndị ọzọ: colonialism, nnwere onwe, ịdabere na United States, ịda ogbenye na ịda ogbenye karịa mgbe ị na-etinye ihe nlereanya akụ na ụba neoliberal rere mgbe niile na nsonaazụ ọjọọ. .
Costa Rica E kewara ya gaa n’ógbè asaa. Ọ dị na isthmus nke Central America na O nwere oke osimiri na Caribbean Sea na Pacific Ocean. Ndị agbata obi ya bụ Nicaragua, Panama na Ecuador na Colombia. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ obodo oke ugwu, nke nwere ọnụ ọnụ n'etiti 900 na 1800 mita n'ịdị elu yana ngụkọta nke ugwu anọ bụ isi na ndị ọzọ nke abụọ. O nwere ugwu kachasị elu n'akụkụ a nke kọntinent ahụ, ugwu Chirripó, 3820 mita n'elu oke osimiri.
O nwere ugwu mgbawa na-arụ ọrụ yana ọtụtụ agwaetiti. N'Oké Osimiri Caribbean bụ Uvita Island na Calero Island, dịka ọmụmaatụ, na Pacific Islands Islands Islands nke Gulf of Nicoya, Tortuga Island, Cocos Island, Caño Island na ọtụtụ ndị ọzọ. Nnukwu ihe dị iche iche dị ndụ n'ime ndụ emeela ka ọ bụrụ ọkwa ihe nketa ụwa.
Kedu mgbe ị ga-aga Costa Rica?
Dị ka ebe ndị njem nlegharị anya niile ọgbaghara covid19 O metụtawo ya nke ukwuu. Ọ bụrụ na tupu mmadụ na-ezo aka na mmiri ozuzo, ìgwè mmadụ ma ọ bụ okpomọkụ mgbe ị na-eme njem, taa ọ gaghị ekwe omume izere ọrịa na-efe efe.
N'iburu ọnọdụ a, mba ahụ agbalịwo dị ka o kwere mee iji belata ihe ize ndụ na ikpe na n'ihi nke a etinyewo usoro ahụike nke oge a na nke n'efu na ọrụ nke ndị njem na-abata na ala ya. Site na Nọvemba 2020 ndị ọbịa mba ụwa niile nwere ike ịbanye, ya mere e mechiri ya maka obere oge. Ma mgbe ahụ, ọ bụghị kwarantaini ma ọ bụ ule adịghị mkpa.
Yabụ, olee mgbe ị ga-aga Costa Rica? Oge kacha ewu ewu ime nke a bụ n'oge ezumike kacha elu nke na-ada na ekeresimesi na afọ ọhụrụ. Ma, ọ ka mma mgbe niile Dodge ya a bit, otú anyị nwere ike na-ekwu na ọ ka mma na-aga a di na nwunye nke izu mgbe e mesịrị. Enwere mmadụ ole na ole.
Oge mmiri ozuzo na Costa Rica na-agwụ na Disemba ma oke ọhịa na-anọgide na-ekpo ọkụ ruo afọ ọhụrụ, mgbe ike nke anyanwụ na-agwụcha ha na anyanwụ na-enwu n'akụkụ osimiri. Nke bụ eziokwu bụ na nke a bụ otu n'ime oge kachasị mma nke afọ iji nwee obi ụtọ n'okike, n'ihi na ụdị okpomọkụ dị ka enwe na sloths na-esonyere nnụnụ ndị na-akwaga n'ebe ugwu, whale humpback na-amụ nwa n'ime mmiri ọkụ nakwa nduru oké osimiri na-amụba na ya. osimiri.
Maka ọtụtụ oge kachasị mma abụghị nke a, Otú ọ dị, ma July na August. Ọ bụ eziokwu na mmiri na-ezo karịa mana enwere ndị ọbịa ole na ole yana ọnụ ahịa ka mma. Ma ọ bụrụ na ịchọghị ntanye mmiri, ma ọ bụ ntakịrị ntakịrị, mgbe ahụ ị ga-abanyerịrị oge ọkọchị na Caribbean bụ n'etiti Septemba na Ọktọba.
Dị ka ị hụworo, ọ dịghị oge ọjọọ iji gaa Costa Rica na n'eziokwu ihe niile dabere n'ihe ịchọrọ ime na ihe ndị ka mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere oge n'etiti afọ mgbe ahụ ị nwere ike họrọ oge ka mma. Naanị họrọ ọnwa wee hụ otú ihu igwe dị ka mgbe ahụ, ole mmiri ozuzo na-ezo, ụdị ịkwaga anụmanụ ị ga-ahụ na otú ndụ obodo dị kwa ụbọchị (ememme, ezumike, wdg).
Ma olee mgbe ihu igwe kacha mma? Dabere na ebe ahụ anyị na-ekwu maka ya. Eziokwu bụ Costa Rica nwere ọtụtụ microclimates na ebe otu nwere ike inwe idei mmiri, onye nke ọzọ nwere ike ịnwụ karịa Sahara. N'ozuzu, a na-ahọrọ njem na oge nke mmiri ozuzo ole na ole ma ọ bụ ihe a na-akpọ "oge green" (site na Mee ruo Nọvemba). Ọ ga-abụ oyi na mba ahụ: ọ dịghị njem nlegharị anya, ọnụ ahịa dị ala ma ọ bụ ezie na mkpọda ugwu nwere ike ịbụ mmiri. ụbọchị ndị zuru okè anwụ na-acha.
N'agbanyeghị nke a, oge a n'afọ nwekwara ike inwe adịghị ike ya: mpaghara ụfọdụ nwere ezigbo iru mmiri, karịsịa akụkụ Atlantic na ndịda ọdịda anyanwụ na ugwu ọdịda anyanwụ. Osa Peninsula nwere oke mmiri ozuzo na ịmara na ọ dị mgbagwoju anya, na mgbakwunye na ọtụtụ ụlọ na-emechi na September na October. Ọ nwekwara ike ịbụ ntakịrị ọchịchịrị ka abalị okpomọkụ dị ogologo ebe a, n'ihi ịdị nso na equator. Ọ bụrụ na gị Costa Rica bụ otu na anyanwụ, ị ga-aga na Jenụwarị, February na March.
N'akụkụ Pacific, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka oge mmiri na ọkọchị, anyị na-ekwukwu banyere Nicoya, Guanacaste, nke dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Ndị fọdụrụ n'ụsọ oké osimiri Pasifik bụ ugwu ugwu ma na-agbaso usoro mmiri ozuzo n'ozuzu ya. Ugbu a, n'akụkụ Caribbean, n'ebe ọwụwa anyanwụ, e nwere mgbanwe siri ike na ihu igwe dabere na oge ọ na-emekarị ka mmiri ozuzo na-ezo n'afọ niile. A na-agbaji iwu a na Septemba na Ọktọba, nke ọ bụ ezie na mba ndị ọzọ nwere oke mmiri ozuzo, osimiri Caribbean na-anọgide na-akpọnwụ, anwụ na-ekpo ọkụ.
Oge njem nlegharị anya dị elu na nke dị ala na-agbaso usoro mmiri ozuzo n'akụkụ Pacific, nke bụ ebe ntụrụndụ dị. Oge ọkọchị nke na-amalite site na Jenụwarị ruo March bụ otu ihe na ndị mmadụ na ọnụ ahịa dị oke ọnụ na oge kacha elu bụ izu abụọ site na tupu ekeresimesi ruo mgbe afọ ọhụrụ gachara.
Ihe kachasị mma banyere oge dị elu bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihu igwe, ma ọ bụghị ọnụ ahịa. O siri ike ịme ndoputa, enwere ọtụtụ mmadụ na n'akụkụ osimiri enwere igwe mmadụ. Cheedị na ndị niile bi n'ebe ugwu nọ ebe ahụ na-agbanahụ oké oyi na snow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Mgbe ị ga-aga Costa Rica
Obodo kachasị mma na Catalonia